औशविट्ज लाइब्रेरियन, यातना शिविरको अर्को दर्शन | वर्तमान साहित्य
औसविट्ज लाइब्रेरियन (२०१२) स्पेनका लेखक र पत्रकार एन्टोनियो गोन्जालेज इटुर्बेको ऐतिहासिक उपन्यास हो। यसमा डायटा अडलेरोवाले गरेको उपलब्धीको वर्णन गर्दछ, जो उनी १ly वर्षको मात्र थिइन, पोल्याण्डको औशविट्स यातना शिविरको मध्यमा एउटा सांस्कृतिक नायिका बनिन्।
यस केटीले ब्लक 31१ का बच्चाहरूलाई पुस्तकहरू प्रस्ताव गर्‍यो र - यस क्षेत्रको प्रमुख फ्रेडी हिर्शको निर्देशनमा - शिक्षणका लागि गोप्य ठाउँ। त्यसकारण, यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ नाजीवादको त्रासलाई हटाउन मानव प्रतिरोधको बारेमा एउटा प्रेरक कथा। अचम्म मान्नुपर्दैन, यो शीर्षक 31१ भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ र यसले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू जितेको छ।
1.1 साहित्यिक क्यारियर
2 औश्वित्जको लाइब्रेरियनको सारांश
3 कामको महत्व
3.1 पीडित र पुस्तकहरुलाई श्रद्धांजलि
4 Auschitz को लाइब्रेरियन को विश्लेषण
4.2 उपन्यासका थिमहरू
4.3 आशा र हुनेछ
एन्टोनियो गोन्जालेज इटुर्बेको जन्म १ 1967। Spain मा स्पेनको जारागोजामा भएको थियो। उनले आफ्नो बाल्यावस्था र युवावस्था बार्सिलोनामा बिताए जहाँ उनले सूचना विज्ञानको अध्ययन गरे। १ 1991 XNUMX १ मा स्नातक हुनु अघि उनले विभिन्न ट्रेडहरूमा काम गरे: बेकरदेखि स्थानीय टेलिभिजनका पत्रकार सहयोगी सम्म आफूलाई समर्थन गर्न र अध्ययन पूरा गर्न।
स्नातक गरे पछि, उनले साहित्यिक र कलात्मक क्षेत्र सम्बन्धी म्यागजिनहरू र प्रकाशनहरूको सम्पादक-सम्पादक-प्रमुखको रूपमा सेवा गरेका छन्। उसले दैनिक पूरकहरूमा सांस्कृतिक आउटरीच कार्य पनि गरेको छ La Vanguardia. आज उनी पत्रिकाका निर्देशक हुन् पुस्तक कम्पासएक शिक्षक हुनुको अलावा बार्सिलोना विश्वविद्यालय र म्याड्रिडको स्वायत्त विश्वविद्यालयमा।
चार उपन्यास, दुई निबन्ध र सत्रह बाल पुस्तक (दुई श्रृंखलामा विभाजित) एन्टोनियो गोन्जालेज इटुर्बेको साहित्यिक सामान हो। यो सँगै शुरू गरिएको यात्रा हो सीधा मोड़ियो (२००)), उनको पहिलो उपन्यास, जसको साथ, उनले केही मान्यता प्राप्त गरे। यद्यपि, कुनै श without्का बिना, उसको सब भन्दा राम्रो परिचित काम र राम्रो सम्पादकीय नम्बरहरू भएको छ औसविट्ज लाइब्रेरियन.
सारांश औसविट्ज लाइब्रेरियन
यातना शिविरमा र संहार औश्विट्स, फ्रेडी हर्स नामको एक जर्मन यहूदी, ब्यारेकको चार्ज लिन नियुक्त गरियो ,१, जहाँ त्यहाँ बच्चाहरू छन्। नाजीहरूको अभिव्यक्ति निषेधको बावजुद, Hirsch सधैं गुप्त स्कूल सिर्जना गर्ने इच्छा थियो। स्पष्टतः यो कुनै साधारण काम थिएन किनकि अध्ययन, धर्म वा राजनीतिको पाठ पूर्णतया निषेध गरिएको थियो।
पछि, सानो Dita Adlerova यातना शिविरमा आइपुगे, जसले १ 14 वर्षको उमेरमा पुस्तकालयको रूपमा सहयोग गर्न राजी भए। अर्कोतर्फ, त्यो डरलाग्दो घेरामा दैनिक जीवन अनिवार्य रूपमा एक त्रासदी हुनेछ। प्लट बढ्दै जाँदा, भयानक र दु: खी कथाहरू भनिन्छ। तर त्यहाँ प्रेमको लागि ठाउँ पनि थियो (उदाहरणका लागि, नाजी सैनिक र एक युवती यहूदी महिलाको बीच)।
को लाइब्रेरियन ...
Dita एक वर्ष को लागी एक पुस्तकालय को रूप मा उनको काम शुरू गर्दछ। त्यो समयमा उनी लुकिराख्छिन् (कहिलेकाँही उनको लुगा भित्र) त्यहाँ आठ मात्र पुस्तकहरु, ती मध्ये HG वेल्स वा फ्रायड जस्ता लेखकहरु छन्। यसैले, Adlerova स्वतन्त्रता को प्रतिबद्धता को माध्यम बाट आतंक मा पार। सम्भवतः, ती युवा लाइब्रेरियनलाई थाहा थिएन कि उनीले यसलाई अस्वित्जबाट जीवित बनाउँछिन्।
तैपनि, युवा पात्रले आफ्नो बारेमा धेरै सोचे बिना सानो पुस्तकालयको रक्षा गर्न कार्य गर्दछ। पछि, बर्गन-बेलसेनको उनको स्थानान्तरण - जसमा टाइफसको कारण उनको मृत्यु भयो एन स्पष्ट छ- जर्मनीमा। पछि, हिर्शको मृत्यु हुन्छ र दिता कुख्यात डा। मेंगेलेलाई भेट्छ (यहूदीहरूको साथ प्रयोगको लागि प्रख्यात)। अन्तमा, उनी युद्धको अन्त्यतिर रिहा गरियो।
जबकि १ 1945। In मा नाजीहरूको पतन भएको लामो समय भइसकेको छ र त्यसबेलादेखि विश्वमा ठूलो परिवर्तन आएको छ, त्यो मानव त्रासदी अझै छ। अर्थात्, la शोआ, अभिव्यक्ति जसको अर्थ "प्रकोप" हो, यसले मृत्युहरूको अविश्वसनीय संख्यालाई मात्र प्रतीक बनाउँदैन, तर मानव दुष्टताको उचालीकरण पनि। यस कारणले गर्दा, सामान्यतया साहित्यले मेमोरी जोगाउन के भयो फेरि बनाउँदछ।
वास्तवमा, यातना शिविरमा भएको कहानी लिँदा, औसविट्ज लाइब्रेरियन समाजलाई सन्देश पठाउँदै छ: “याद गर"। तसर्थ, यसको लेखकले यस मुद्दाको वैधता घोषणा गर्दछ कि सामान्यतया यूरोप र पश्चिम को लागी एक जीवित पीडा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
पीडित र पुस्तकहरुलाई श्रद्धांजलि
यस उपन्यासलाई दिइएको अर्थको सन्दर्भमा, तिनीहरूको प्रशंसापत्र विशेष गरी मूल्यवान छ। त्यस्तै गरी, यो नाजी यातना शिविरमा के भयो भन्ने बारेमा उनको यथार्थवादी कथामा पनि मान्यता दिइयो। उही समयमा, यो पुस्तक पीडितलाई श्रद्धांजलि र नाजीवादबाट पीडित भएकाहरूको बलको समीक्षा हो।
थप रूपमा, एक धेरै प्रेरणादायक तत्व देखा पर्छ - लेखकको लागि, पाठकहरूको लागि पनिः पुस्तकहरूको शक्ति। यो केही हदसम्म पुस्तकालयहरूप्रति इटर्बेले घोषणा गरेको प्रेमको कारणले हो किनकि यस प्रकारले उनले डायटा क्रस (नायकको विवाहित नाम) को कथा पत्ता लगाए।
Auschitz को लाइब्रेरियन को विश्लेषण
कच्चा र विस्तृत कथाले केही काल्पनिक अंशहरू समाहित गर्दछ, तर सम्पूर्ण कथा पूर्ण रूपमा वास्तविक घटनाहरूमा आधारित छ।। यस पाठमा, नायकले उनको साहसको साथ पाठकलाई जित्छन् र बाँच्नको लागि प्रबन्ध गर्छन्। अहिले दिता इजरायलमा बस्छिन्, लेखक ओट्टो क्राउसकी विधवा (जससँग उनी she 54 बर्ष भइसकेका थिए)।
अर्कोतर्फ, उपन्यासमा रहेको फिक्शन अस्थायी वा चरित्र संयोजनमा कम गरिएको छ, तर कुनै खण्डमा झूट बोलेन वा बढाइचढाइ गरिएको छैन। वास्तविकतामा, प्राय: सबै नामहरू, मितिहरू, ठाउँहरू, र सन्दर्भहरू सहि छन्। पछिल्लो कुरा Dita Kraus आफैंले एक साक्षात्कारमा पुष्टि गर्‍यो जब उनीले सर्वश्रेष्ठ-विक्रेता रेटिंग दिएकी थिइन अमेजन.
दोस्रो विश्व युद्ध (वा कुनै लामो समयदेखि चलिरहेको युद्धको बारेमा) बारेको ऐतिहासिक उपन्यासमा, मानव त्रासदीको विषय अक्सर षड्यन्त्रको केन्द्रबिन्दु हुन्छ। तर यो मामला छैन औसविट्ज लाइब्रेरियन। बरु फोकस मञ्चमा पर्दछ जहाँ वर्णन गरिएको चरित्रद्वारा गरिएको साहसको प्रदर्शन भएको थियो।
मानवीय दुष्टको विषयवस्तु ट्रान्जर्सल हो, तर ईटर्बेले प्रस्तुत गर्न चाहेको विषयवस्तु फरक छन्। यद्यपि यति क्रूरता र मृत्युको सामना गर्नुपर्दा, तपाईं केवल प्रशंसनीय ईच्छाको साथमा जानुहुन्छ। यस सन्दर्भमा, फ्रेडी हिर्श साहसको मूर्त रूप हो जबकि डीटा प्रतिबद्धताको प्रतीक हो; दुबैले आशालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
आशा र हुनेछ
औसविट्ज लाइब्रेरियन मानव सद्गुणहरू र गुणहरू सबैभन्दा नराम्रो परिदृश्यमा उभरिन सक्षम गर्न को लागी एक आड हो। किनभने, सत्य भन्नुपर्दा, युद्धमा कहिल्यै सुखद अन्त हुँदैन। त्यस्ता प्रकारका क्लोजरहरूको केवल हलिउड फिल्महरूमा स्थान हुन्छ; वास्तविक जीवन केहि अर्को हो।
यस्तो परिमाणको एक संघर्ष पछि, केवल बचेका, विस्थापित, भग्नावशेष र पीडा रहन्छ। जे भए पनि, साक्षीहरू पीडितहरू र घटनाहरूलाई बिर्सन नदिन रोक्न भविष्यका पुस्ताहरूलाई चेतावनी दिन सक्षम हुनेछन् ... यो पतितलाई सम्मान गर्ने उत्तम तरिका हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » औसविट्ज लाइब्रेरियन